News - Sida loo Xullo Slide Dhalinta Kubbadda Wanaagsan
Dhawaan, asxaabta qaar qurxinta guriga, waxay i weydiisteen inaan iibsado kuwa guryaha jiida si aan ugu fiirsado dhinacyadaas. Hadda waxaan kula wadaagayaa khibradeyda:
doorashada boodhka sidda kubbadda ayaa mari kara tijaabooyinka soo socda si loo xusho kanaal telescopic bir ah oo tayo fiican leh:
1. Iibsasho boodhka dhaldhalaalka orso kubbada marka hore waxay kuxirantahay muuqaalka dhalada dhalada kubbada qaada, si loo arko in dusha sare ee alaabooyinka sifiican loola dhaqmay iyo inkale, ma jiraan calaamado miridhku leeyahay.
2. Fiiri habsami u socodka iyo qaab-dhismeedka orodyahanka khaanadda ku sidata kubbadda, ku xaji tareenka go'an ee biraha dhajinta kubbadda qaadaya, ka dibna u janjeero 45 digrii si aad u aragto haddii ay si otomaatig ah ugu socon karto ilaa dhamaadka (qaar ka mid ah orodyahannada xajmida yar ee xajinaya ee sitoos ah uma toos u leexan karaan sababtoo ah miisaan aan ku filnayn, dhacdo caadi ah). Hadday u rogi karto ilaa dhamaadka, jilicsanaanta orodyahannada goolasha jeexdin ee kubbadda ayaa wali suurtagal ah. Kadib jiid tareenka xaggiisa dambe ilaa dhamaadka, hal gacan ayaa haya tareenka go'an, gacanta kalena waxay qabataa tareenka la dhaqaajin karo, isagoo hoos iyo hoos u lulmaya, si loo tijaabiyo dhismaha iyo shaqadiisa tareenka slide, waxaa fiican in la doorto wax yar tareenka is rog rogaya
3. Eeg dhumucda walxaha loo isticmaalo kanaalka khaanadda telescopic, iyo walxaha ay u adeegsato WALITON waa 1.2 / 1.2 / 1.5 mm waqtiga iyo 1.0 / 1.0 / 1.2 mm. Waxyaabaha loo isticmaalo kanaalka khaanadda asal ahaan waa saxan bir ah oo qabow-duuban, iyo sidoo kale bir birta ah. Markaan dooranayno iyo wax iibsiga, waa inaan go'aansanno halka aan ku isticmaaleyno kanaalada telescopic-ka. Meelaha qoyan sida armaajooyinka musqusha, waa inaan u isticmaalnaa silsiladaha birta ah ee birta ah. Wixii khaanadaha guud, waa inaan u isticmaalnaa bogagga bir bir ah oo qabow-duuban.
Shahaadada tayada ee dariiqooyinka isbadalka (sida imisa shahaadooyin imtixaan tayo oo awood leh oo ay mari karto SGS) iyo dammaanad qaadka amaan ee ay soosaarayaashu balan qaadeen.
GERISS HARDWARE waa soo saare shaashad kubbadda ku xeel dheer oo ku takhasustay Shiinaha illaa iyo 1999. In ka badan 20 sano wax soo saar & khibrad iib. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Fakis: 0086 21 66368005
Maamulaha Iibka Caalamiga ah: James Peng